“Ny famindram-pon’i Jehovah no hambarako, dia ny fiderana an’i Jehovah araka izay rehetra nataony tamintsika ny haben’ny fahasoavana tamin’ny taranak’IIsiraely. Izay nomeny azy araka ny fiantrany sy araka ny haben’ny famindram-pony. “Isa. 63:7
Rehefa mitohy mamelombelona ny fanahy ny famindrampon’i Jehovah, dia ho hita eo amin’ny endrika amin’ny fisehoan’ny fiadanana sy ny fifaliana izany. Ho hita eo amin’ny teny sy ny asa izany. Ary ny Fanahy Masin’i Kristy, ilay malala-tananana, miasa ao am-po, dia hamokatra hery miasa mangina ho amin’ny hafa eo amin’ny fiainana (...)
Moa ve isika tsy manana antony hiresahana ny fahatsaran’Andriamanitra sy hanambara ny heriny? Rehefa tsara fanahy amintsika ireo namana dia heverintsika ho tombontsoa ny misaotra azy ireo noho ny hatsaram-panahiny. Tokony ho betsaka manao ahoana re ny fiheverantsika ny fifaliana amin’ny fanolorana fisaorana ho an’ilay Namana izay nanome antsika fanomezana tsara sy tanteraka rehetra. Amin’izany dia aoka isika, ao amin’ny fiangonana tsirairay, hikolokolo fisaorana ho an’Andriamanitra. Aoka isika hampianatra ny molotsika mba hidera an’Andriamanitra ao anivon’ny fianakaviana (...). Aoka ireo fan,omezana sy fanatitra ataontsika hanambara ny fankasitrahantsika noho ny tombontsoa izay raisintsika isan’andro. Tokony haneho mandrakariva ny fifaliana ao amin’ny Tompo amin’ny zavatra rehetra isika.
Hoy i Davida hoe: “Izaho tia an’i Jehovah, satria efa nandre ny fenon’ny fifonako Izy. Satria efa nanongilana ny sofiny tamiko Izy, dia hiantso aho, raha mbola velona koa” Sal. 116:1,2. Ny fahatsaran’Andriamanitra amin’nyfihainoana sy ny famaliana ny fivavahantsika dia mametraka antsika eo ambanyfanerena mavesatra mba haneho ny fankasitrahantsika noho ny fitahiana narotsaka tamintsika. Tokony hankalaza an’Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay ataontsika isika. Ireo fitahiana voaray tamin’ny valim-bavaka dia tokony ho hankasitrahana faingana (...)
Manao izay mampalahelo ny fanahin’i Kristy isika amin’ny fitarainana sy ny fimonomononana ary ny tsy fankasitrahana. Tsy tokony hanala baraka an’Andriamanitra isika amin’ny fifandraisam-pisaonan’ny fitsapana izay toa mampalahelo. Ny fitsapana rehetra izay raisina ho toy ny mpanabe dia hiteraka fifaliana.Ny fiainam-pivavahana iray manontolo dia hanandratra, hampisondrotra, hahamendrik’andriana, ho fofo-manitra miaraka amin’ny teny sy ny asa tsara.
Aoka hanjaka ao amin’ny fanahinao ny fiadanan’Andriamanitra . Amin’izay dia hanana hery hizakana ny fahoriana rehetra ianao, ary hifaly ianao fa manana fahasoavana hiaretana izany. Derao ny Tompo; resaho ny fahatsarany; ambarao ny heriny. Omeo mamy ny rivotra manodidina ny fanahinao.